Getting bored on Facebook thinking about to write my blog back.
Posted by NLS at 2/21/2019 12:32:00 PM0comments Links to this post
August Summary 2012
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ကျွန်တော် ဘဝင်မကျဆုံးက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွေ ပေးတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ ဘာကြောင့် ဒါတွေကို ခွင့်ပြုခဲ့ရတာလဲ။ ဘာကြောင့် သူတို့ကိုပဲ ရွေးပြီး ခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ။ ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ပြောပြကြပါဦး။
၅၆။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည် -
(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ လေရှီးမြို့နယ်၊ လဟယ်မြို့နယ်နှင့် နန်းယွန်းမြို့နယ်တို့ကို စုစည်းပြီး နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊
(ခ) ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရွာငံမြို့နယ်နှင့် ပင်းတယမြို့နယ်တို့ကို စုစည်းပြီး ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊
(ဂ) ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဟိုပုန်းမြို့နယ်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်နှင့် ပင်လောင်းမြို့နယ် တို့ကို စုစည်းပြီး ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊
(ဃ) ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ နမ့်ဆန်မြို့နယ်နှင့် မန်တုံမြို့နယ်တို့ကို စုစည်းပြီး ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊
(င) ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်နှင့် လောက်ကိုင်မြို့နယ် တို့ကို စုစည်းပြီး ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊
(စ) ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မိုင်းမောမြို့နယ်၊ ပန်ဝိုင်မြို့နယ်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ မက်မန်းမြို့နယ်နှင့် ပန်ဆန်း (ပန်းခမ်း) မြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ် တို့ကို ခရိုင်နှစ်ခရိုင် ဖွဲ့ပြီး ““၀”” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်က အယောက် ၄၀၀ ကျော် ရှိတယ်။ အဲဒီအထဲမယ် အစိုးရက ဆရာအဖြစ်နဲ့ ကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့တာ လက်ဆယ်ချောင်း မပြည့်။ ဆရာမဖြစ်တဲ့ သူတွေလည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အမျိုးမျိုး ပြောင်းလုပ်ကြရရှာတယ်။ ဒါတွေကိုရော ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
မင်းသားမလုပ်ရလို့ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်တဲ့အထဲ အသက် ၃၂ နှစ်အထိ ဘယ်တုန်းကမှ မပါခဲ့ပါလေ။ ဒါပေမယ့် မှားနေတာကို မကောင်းတာကို မှားနေတယ် မကောင်းဘူးလို့ အချက်ကျကျ ထောက်ပြခဲ့ရင် ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိသူတွေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံလိုပါတယ်။
Sept 7, 2012
အပြင်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်း ထုံးတမ်းစဉ်လာ၊ ရိုးရာဓလေ့၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ပုံ၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆ စတာတွေကို တွေ့ရတာ သိပ်နည်းပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့လုပ်နိုင်ဖို့ သူတို့ နည်းပညာအကြောင်းတွေလည်း သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်း နားလည်မှု ပိုလာနိုင်ပါမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတွေအကြောင်းတောင် အကုန် မသိရတာမို့ ကာလတစ်ခုအထိ အလှမ်းဝေးလို့တော့ နေဦးမယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ဒေါက်တာမာလာအောင် အကြောင်းကို လွှတ်တော်မှာမေးတော့ ဦးအေးကြူက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖြေသွားဘူး။ ဒေါက်တာမာလာအောင်က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုဟိုကု (Tohoku) တက္ကသိုလ်ကနေ ဥပဒေအဓိကနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှာ Head of the Department of Law တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ အခုလက်ရှိတော့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဒုပါမောက္ခချုပ်အနေနဲ့ တာဝန်ယူထားတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ဘယ်သူ့ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်မှ မပါဘဲ ရေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥပဒေပညာရှင်တွေ ကြားထဲမှာတောင် ထောက်ခံသူနဲ့ ကန့်ကွက်သူတွေ ကွဲပြားကြတယ်ဆိုတာ ဥပဒေကိုယ်တိုင်မှာ အားနည်းချက်နဲ့ မတိကျမှုတွေများ ရှိနေလို့လား အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုနိုင်နေလို့လားလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဥပဒေကို ညှိနှိုင်းမပြင်ဆင်ဘဲ အပြုတ်တိုက်ကြတာမျိုးကတော့ အရင်ကလိုပဲ ရန်/ငါ စည်း ခြားကြတဲ့ကိစ္စလို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ကောင်းမှုပြုလို့ အကျိုးပေးမယ် ဆိုရင်တောင် ကာလအတော်ကြာမှ အကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်။ မကောင်းမှု ပြုရင်တော့ အကျိုးပေးက အတော်မြန်တယ်လို့။ ဒါကြောင့်လည်း တခါတလေ ကိုယ်က ကောင်းမှုတွေ ဘယ်လောက်ပြုပြု ဘဝမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေပဲ ဆက်တိုက် ကြုံရတဲ့အခါ ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတာ အလကားပါလို့ တွေးမိခဲ့တယ်။ အခုလိုကာလမှာ ဓမ္မပဒလေး ဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။
၁၁၉။ ပါပေါပိ ပဿတိ ဘဒြံ၊ ယာဝ ပါပံ န ပစ္စတိ။
ယဒါ စ ပစ္စတိ ပါပံ၊ အထ ပါပေါ ပါပါနိ ပဿတိ။
၁၂၀။ ဘဒြောပိ ပဿတိ ပါပံ၊ ယာဝ ဘဒြံ န ပစ္စတိ။
ယဒါ စ ပစ္စတိ ဘဒြံ၊ အထ ဘဒြော ဘဒြာနိ ပဿတိ။
၁၁၉။ မကောင်းမှုပြုသောသူပင် ဖြစ်သော်လည်း မကောင်းမှု အကျိုးမပေးသေးသရွေ့ ကာလပတ်လုံး ကောင်းမြတ်သောအာရုံကို တွေ့မြင်နိုင်သေး၏၊ မကောင်းမှုအကျိုးပေးသော အခါ၌မူကား မကောင်းမှုပြုသူသည် မကောင်းကျိုးတို့ကိုသာ တွေ့မြင်ရတော့၏။
၁၂၀။ ကောင်းမှုပြုသောသူပင် ဖြစ်သော်လည်း ကောင်းမှုအကျိုး မပေးသေးသရွေ့ ကာလပတ်လုံး မကောင်းသောအာရုံကို တွေ့မြင်နိုင်သေး၏၊ ကောင်းမှုအကျိုးပေးသော အခါ၌မူကား ကောင်းမှုပြုသူသည် ကောင်းကျိုးတို့ကိုသာ တွေ့မြင်ရလေတော့၏။
၈၄။ န အတ္တဟေတု န ပရဿ ဟေတု၊ န ပုတ္တမိစ္ဆေ န ဓနံ န ရဋ္ဌံ။
န ဣစ္ဆေယျ အဓမ္မေန သမိဒ္ဓိမတ္တနော၊ သ သီလ၀ါ ပည၀ါ ဓမ္မိကော သိယာ။
၈၄။ ပညာရှိမည်သည် မိမိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါး အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ (မကောင်းမှုကိုမပြု) မကောင်းမှုဖြင့် သားသမီး ဥစ္စာ၊ တိုင်းပြည်ကို အလိုမရှိရာ၊ မတရားမှုဖြင့် မိမိ၏ ပြည့်စုံမှုကို အလိုမရှိရာ၊ ထိုသို့ သဘောရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် သီလရှိသူ ပညာရှိသူ တရားရှိသူ ဖြစ်၏။
84. If, whether for his own sake or for the sake of others,aman wishes neither for sons nor for wealth nor for power, and if he does not wish for his own success by unfair means, then he is virtuous, wise and righteous.
သတင်းစာမှာ ဒီဟာကို ဖတ်လိုက်ရကတည်းက ဒီဆရာမက ဘယ်လိုသဘောနဲ့ ဒီကြားထဲကို တိုးဝင်သလဲလို့ စစချင်းကို တွေးမိလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိရဲ့ ရာထူးကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့ အတွက်လည်း ဒါဟာ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့ အာဘော်ကို ကိုယ်စားပြုတာလား၊ ပြီးတော့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘာကြောင့် အဖြေမထွက်သေးတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို တစ်ဖက်စောင်းနင်း သတင်းစာထဲ ဖော်ပြတာလည်း ဆိုတာတွေလည်း တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ အခုတော့ လွှတ်တော်မှာ မေးကြပြီ။ တကယ်ဆို ထည့်မယ့်ထည့် အယူအဆ မတူတဲ့ ဆောင်းပါးနှစ်ခုကို ပြိုင်ထည့်ရင်တောင် တော်သေးတယ်။ ဒီအဆိုကို ထောက်ခံပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာဆို ဒါမျိုးကို ဝန်ကြီးတွေက နာယက၊ ဥက္ကဋ္ဌတွေ တက်လုပ်ပြီး ဘာမှမသိဘဲ ညွှန်ကြားချက်တွေ တားမြစ်ချက်တွေ ထုတ်ကြ ဖောကြဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒါမျိုး လိုအပ်နေပါပြီခင်ဗျာ။ တာဝန်ရှိသူများ အမတ်မင်းများ အဆိုတင်သွင်းကြပါလားဗျာ တစ်ခါလာလည်း ရေတွင်းတူး ကျောင်းဆောက် လမ်းပြင်ကိစ္စတွေ တင်သွင်းနေရာကနေ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ကြားပါရစေဗျာ :(
ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြည်သူပြည်သား အားလုံးလိုလိုက အကူအညီ အထောက်အပံ့ကိုပဲ မျှော်နေကြတယ်။ လပွတ္တာမှာ တစ်မိသားစုလုံး ပါသွားတဲ့ ကိုဂတုံးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့မှာ စက်လှေတစ်စင်းပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ သူ ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကို တတ်နိုင်သမျှ မေ့ထားလိုက်ပြီး အဲဒီကာလမှ တအားကြိုးစားလိုက်တာ မနေမနားဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ နေခဲ့တဲ့ လေးလလောက်မှာ ဒီလူ အတော် ကြီးပွားသွားတယ်။ ကူညီတယ်ဆိုတာမှာလည်း ကိုယ်ကလည်း အလိုက်သင့် အလျားသင့် ပါတတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်တယ်။ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်စိတ် ပျောက်သွားတတ်တယ်။
သူတို့သေသွားတာက အုပ်စုတွင်း အာဏာလုပွဲအတွင်းမှာ သေသွားခဲ့တာ။ တိုက်ပွဲမှာ သေသွားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သူရဲကောင်းတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ သမိုင်းမှာ အပြစ်မရှိဘဲ မြေစာပင်ဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေလို့ပဲ လက်ခံပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဲဒီကာလက တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်တွေကိုတော့ လေးစား အသိအမှတ် ပြုရမှာပါ။
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု ထောက်လှမ်းရေးပါ အစစ်ခံဖို့လိုဟု ဒေါက်တာနိုင်အောင်ပြော။ ထောက်လှမ်းရေးပါ အစစ်ခံဖို့လိုလို့ ပြောရအောင် ထောက်လှမ်းရေးက ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ လူတွေ လွှတ်ထားမိပါတယ် ပြောခဲ့ရင်ရော ခင်ဗျားတို့ကို လူသတ်ဖို့ အခွင့်အာဏာ ဘယ်သူက ပေးထားလို့လဲ။
အစိုးရဆိုတာ ဒါမျိုးဟာတွေကို စစ်ဆေးဖို့တော့ တာဝန်ရှိမယ် ထင်တယ်။ ဒီလိုဟာမျိုးကို ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ တရားဝင် လုပ်ခွင့်ပေးထားလားလည်း သိချင်မိတယ်။ ကုမ္ပဏီလိပ်စာဆိုပြီး ဒါမျိုးတွေလည်း ပေးထားတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကို ဘယ်လောက် ယုံကြည်ရလို့ လူတွေက သူတို့ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေ ပေးနေတယ် သူတို့ ဓာတ်ပုံတွေ တင်နေကြတယ် မသိဘူး။ ဒါမျိုးက နိုင်ငံခြားမှာတောင် သိပ်ပြဿနာတက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေ။ သတိထားသင့်တယ်။ (www.Skylark-vivaha.com)
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကို အစိုးရအထောက်အပံ့ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်တွေဆိုပြီး ခွဲခြားသင့်တယ်။ အစိုးရ၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေက တက္ကသိုလ်တွေကို ထောက်ပံ့တာမျိုး၊ ကူညီတာမျိုးပဲ ရှိသင့်တယ်။ လွှမ်းမိုးမှု မရှိသင့်ဘူး။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းပြီး အဲဒီကောင်စီရဲ့ မူဝါဒအတိုင်းသာ သွားသင့်တယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ အရင်တုန်းက MOE နဲ့ Affiliate ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ တက်သူဟာ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ PR ရဖို့ မခက်ခဲဘူး။ အဲဒီကျောင်းတွေမှာ တက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း Tuition Grants တွေ ပေးထားတယ်။ အဲဒီက ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပြီး အလုပ်ရဖို့လည်း မခက်ခဲဘူး။ MOE အောက်မှာ ဆိုပေမယ့် ဆရာဆရာမ ရွေးချယ်တာ၊ ကျောင်းသားရွှေးချယ်တာတွေကို MOE က ဘာမှ ဝင်မစွက်ဖက်ဘူး။ ကျောင်းကသာ လုပ်တယ်။ ဒီအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ ဆက်ဆံစရာရှိရင် ကျောင်းနဲ့သာ တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ သူငယ်တန်းကစပြီး ပါရဂူအထိကို အစိုးရက ချုပ်ကိုင်ထားတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့လည်း တာဝန်ကြီးတယ်။ အလုပ်များတယ်။ နိုင်အောင်လည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘွဲ့ရတွေသာများလာတယ် ပညာမတတ်ဘူး။ တကယ်ဆို အစိုးရက ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ဒီကိစ္စကို ခွဲခြားပစ်သင့်ပါပြီ။
Main ကြီး တစ်ခုလုံးကို ပြန်ယူလိုက်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နာမည်နဲ့ ပြန်ဖွင့်၊ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဖွဲ့၊ အဲဒီကျောင်းကို Gov က Finicial ပိုင်း Support လုပ်။ အဲဒီမှာဖွင့်မယ့် ဘာသာရပ်အားလုံးကို COE လုပ်လိုက်။ အဲဒီက ထွက်လာမယ့် ကျောင်းသားတွေ အတွက် အာမခံချက်ပေး။ အဲဒါဆိုရင် ဘာသာရပ်တွေ အားလုံးဟာ Faculty တွေ အနေနဲ့ ရှိလာမယ်။ ဘွဲ့ပေးလည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ ပေးလို့ရမယ်။ ဒီတော့ ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ဖို့ကို Qualification မြင့်မြင့်မားမား သတ်မှတ်ထားမယ်။ ကျောင်းပြီးရင်လည်း အလုပ်အကိုင်အတွက် အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ်။ ပြီးတော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုထဲကို အဆင်မြှင့်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တက္ကသိုလ်ကြီးလိုက အဆင့်မြှင့်တဲ့ အတွက် ဘာသာရပ်အလိုက် အဆင့်ခွဲတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံက တကယ်တော်သူတွေပဲ ရှိမယ်။ ဒီလိုလူတော်တွေရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးကို တက်ချင်ရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ဝင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာမျိုးက အဓိပ္ပာယ် ပိုရှိပါတယ်။ ဘာသာရပ်တက္ကသိုလ် တစ်ခုချင်းစီကို အဆင့်ခွဲထုတ်ပစ်တာမျိုးတော့ လက်ခံချင်စရာ မရှိလှပါ။
ရော်နယ်အောင်နိုင်ရော၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရော၊ ဦးစိန်ဝင်းရော၊ မိုးသီးဇွန်ရော၊ ဒေါက်တာဇာနည်ရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဆုံး အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်၊ အစိုးရပြုတ်ကျသွားအောင် ဘာများ လုပ်နိုင်ခဲ့လို့လဲ။ ဒေါ်စုကမှ ဒီနိုင်ငံထဲနေ ဒီနိုင်ငံထဲ တိုက်ပိတ်ခံပြီး အနစ်နာ ခံခဲ့တာမျိုး ရှိသေးတယ်။ ဒီလူတွေ အဝေးကနေ တော်ကီပွားနေတာပဲ ရှိတယ်။ စီးပွားရေးဝိုင်းပိတ်ဆို့ ခိုင်းတာတော့ အောင်မြင်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဲဒါ ဘယ်လောက် ထိရောက်လဲဆိုတာ အစိုးရလူကြီးပိုင်းတွေ သိပ်ချမ်းသာသွားတာနဲ့ ခရိုနီတွေ ပွားများလာတာ အချိုးချကြည့်ဦးမလား။ ပြောရရင် ဦးသန်းရွှေကြီး သိပ်အသက်ကြီးသွားလို့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့မို့လို့ ဒီလောက် ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ငြင်းချင်လည်း ဖင်ပိတ်ငြင်းပေတော့။ ဒါတောင် ခုအချိန်အထိ သူလုပ်ထားတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲက သိပ်တောင် မထွက်နိုင်သေးဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့က သူတို့နဲ့ တွေ့မယ်ဆိုတော့ ဆရာကြီးခန်းတွေက တစခန်း ထလာကြရော။ အစိုးရက အတိုက်အခံ အချင်းချင်း ပါဝါဗဲလန့် လုပ်စေချင်လို့ တပ်လှန့်တဲ့ အကွက်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ပိုတောင်လှဦးမယ်။ အထင်မသေးနဲ့နော့်။ ၁၀ တန်းတောင် မအောင်တဲ့လူကို ဆေးကျောင်းတက်ခိုင်းပြီး ဒုဝန်ကြီး လယ်ဗယ်တန်း ပို့ထားနိုင်တဲ့ အနှစ် ၃၀ စာ ရှဲဒိုး စီမံကိန်းတောင် ခုမှ အသက်ဝင်တယ် ကြားမိသလိုလိုပဲ။
အင်းဝ တံတားဦးနယ်ဟာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာဟာ မြေနိမ့်ပိုင်း ရေလွှမ်းတတ်တဲ့ ဒေသလည်း ဖြစ်တယ်။ တကယ်ဆို မန္တလေးအရှေ့ဘက် ပုသိမ်ကြီးနယ်ထဲ လုပ်တာကမှ လက်ခံနိုင်စရာ ရှိသေးတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအနေနဲ့ ကန့်ကွက်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ တကယ်လို့ ဒီပရောဂျက် မရခဲ့ရင်ရော ဒီကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ သန်းနှစ်ရာကျော်ကို ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ ငွေတိုးပေးထားရင်တောင် ဒီကုမ္ပဏီ အတော်အမြတ်ထွက်နေပြီ။
ဘဝမှာ အမှားအယွင်း လုပ်ခဲ့တာရှိရင် ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာတော့ မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အမှားအယွင်းကို စိတ်ထဲခံစားပြီး ကွဲကြေထိရှနေပြန်ရင်လည်း ဘာအတွက်မှ မကောင်းဘူး။ အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံး တစ်ခုကို လုပ်ပြီး အဲဒီ အမှားအယွင်း တစ်ခုအတွက် ပြန်ပေးဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။
“Life's hard. It's even harder when you're stupid.” ― John Wayne
အုန်းကျူး(န်) ဆိုတဲ့သူ၊ ရိုက်တဲ့သူက ခိုးကူးဘာညာ ညည်းတွားရင် လက်ခံနိုင်သေးတယ်။ နိုင်ငံခြားက သီချင်းတွေကျတော့ တရားမဝင် ကော်ပီဆိုတယ်၊ နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ အကွက်တွေ အချိတ်အဆက်တွေ ကူးချတယ်။ ဒီလိုလူတွေက သောက်ရေးမပါ ခိုးကူးတွေဘာတွေ ပြောနေတာက လာဘ်စားတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်က ဒီကောင်တွေ သူခိုးတွေပါကွာလို့ ပြောနေတာနဲ့ အတူတူပဲ။ အပြောမခံချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း ကင်းအောင်နေလေ။ သောက်ရေးမပါ။
ပြည်ကနေ ရန်ကုန် ကားလမ်းတလျှောက်မှာလည်း MAX က ဂိတ်တွေက ပိုက်ဆံကောက်တယ်။ ပိုက်ဆံတော့ ကောက်တယ်။ ပြေစာတော့ ပြင်မထားကြဘူး။ တောင်းမှပေးတယ်။ တော်တော်များများက မတောင်းကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြောပစ်ခဲ့တာပဲ။ ပြီးတော့ ကောက်ပြန်တော့လည်း ၄၀၆ ကျပ်ကို ၄၅၀ ဆိုပြီး အစွန်းထွက်တွေကို အပြည့်ယူပြီး ကောက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ လမ်းမြို့ကို ဖြတ်ပြန်တော့ မြို့စည်ပင်ကဆိုပြီး ဂိတ်တွေထား ပိုက်ဆံကောက်ပြန်တယ်။အစိုးရမှမဟုတ်ဘူး ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းတွေ အကျင့်ပျက်နေတာလည်း အများကြီးပဲ။
တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှ စစ်တပ်ထဲကလူကြီးတွေ စစ်တပ်အမတ်တွေမှာ ၉၀% လောက်က ဒေါ်စုကို ကွယ်ရာမှာ ကုလားမပဲ ခေါ်တယ်။ တခါတလေ အဝင်ဆိုးတဲ့ ဆေးခါးကြီးတွေဆို Sugar Coated လေး လုပ်ထားကြတာ တွေးမိတယ်။ ပြောင်းပြန်ပဲ။ အာဏာရှင်လို နေခဲ့ကြရတဲ့ သူတိုင်းဟာ အာဏာရှင်လို ဆက်နေချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် တော်တော်များများ အာဏာပလ္လင်ကို အမြဲတမ်း ဖင်နဲ့ ကပ်ထားချင်ကြတာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။
မိန်းမပိုင်းလုံးတွေ ဘာတွေကို နားလည်ပေးလို့ ရသေးတယ်။ ယောက်ျားပိုင်းလုံးတွေ မြင်မြင်နေရတာ စောက်ရမ်းရွံတယ်။ ပြောရရင် လယ်တီပဏ္ဍိတဦးမောင်ကြီးရေးတဲ့ ခင်ခင်ကြီး ၀တ္ထုတွဲကြီးမှာကတည်းက မင်းသား ပိုင်းလုံးကောင်ကို သနားအောင် ဂရုဏာသက်လာအောင် ရေးထားတာမျိုးတွေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အတော် ရွံဖို့ကောင်းမှန်း သိလာတယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ ၁၀ သိန်းနဲ့ အလုပ်လက်ခံခဲ့တယ်။ ပရောဂျက်ကာလကို ၃ လ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ စပြီဆိုတာနဲ့ ပရောဂျက်စကုပ်ထဲ မပါတဲ့ သူတို့ ဝန်ထမ်းပရိုဂရမ်မာတွေကို သုံးရက် အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တာ သွားသင်ပေးခဲ့တယ်။ ကြိုတင် လေ့လာနိုင်အောင် ဒေတာတွေလည်း ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အဲဒီပရောဂျက်ကို ဆက်မလုပ်ဘဲ တခြားဟာတွေ လုပ်နေတယ်။ ၂လခွဲ ကြာတဲ့အချိန်အထိ တစ်ပြားမှ မရလို့ ပြောတဲ့အခါမှ ၅ သိန်း ရတယ်။ ဒီလ ပထမပတ်မှာ ဒီဟာကို ပြန်စမယ် လုပ်ဖြစ်ဖြစ် မလုပ်ဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံအကြေချေမယ်လို့ ပြောပေမယ့် ဒီနေ့ဆို ၃ လ ခွဲလောက် ရှိလာခဲ့ပြီ။ ဒီသုံးလခွဲအတွင်း ကျွန်တော့်ဆီကို တစ်ကြိမ်မှ မဆက်သွယ်ခဲ့ဘူး။ ဆိုတော့ကာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျာ။ ဒီဒေတာတွေနဲ့ ဒီစနစ်တွေ နားလည်တတ်ကျွမ်းဖို့ ကျွန်တော် နှစ်အတော်ကြာ အချိန်အကုန်ခံ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံ လေ့လာခဲ့ရတယ်။ ဒါတွေကို မလေးစားကြတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ လုပ်ချင်တဲ့အချိန် ထလုပ်မှ ကျွန်တော် မအားလည်း လိုက်လုပ်ပေးရမှာလား။ ကိုယ့်ဒေတာတချို့ ပေးထားပြီး နည်းလမ်းတွေ သင်ပေးထားပြီး ကိုယ့်ဘက်က ငွေအကြေမရတာ တရားသလား။
ကိုယ်က ၂၀၀၇-၈ လောက်ကတည်းက Egress Capacity Building လုပ်ငန်းတွေကို ထောက်ခံပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က အားသွန်ခွန်စိုက် ပါဝင်ကူညီခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Egress က ကိုယ့်ကို ဆက်ဆံလာတဲ့ ပုံစံက မမိုက်ဘူး။
(ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဟာမျိုးနွယ်စုအတူတူတွေပါ။ ဘာသာစကားချင်းလဲ နီးစပ်ကြတယ်) ဒီစကားက မမှန်ပါဘူး။ ဗမာရော ရခိုင်ရောဟာ လူမျိုးစုကြီးအားဖြင့် မွန်ဂိုလွိုက်က ဆင်းသက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလီက Caucasoid ထဲ ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာသာစကား အားဖြင့် ဆိုရင်လည်း ဗမာ ရခိုင်က Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Burmish, Southern ကနေ ဆင်းသက်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီ အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Eastern zone, Bengali-Assamese ကနေ ဆင်းသက်ပါတယ်။ နယ်မြေချင်း နီးစပ်နေလို့ ဟိုကစကားဒီရောက် ဒီကစကား ဟိုရောက် ဖြစ်နေတာကို ဘာသာစကားချင်း နီးစပ်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါ။ နယ်မြေကူးလူးကြရာက ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှားကြီးကို အမှန်လိုလို ပြောနေလို့ပါ။
မြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးဝေးနေလေ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း များများပြောလေ။
အာနန္ဒာ ...ရဟန်းယောက်ျားဖြစ်စေ ရဟန်းမိန်းမဖြစ်စေ လူဥပါသကာ ယောက်ျားဖြစ်စေ လူဥပါသိကာမဖြစ်စေ မည်သူမဆို အရိယမဂ်၏ ရှေးအဖို့၌ ဖြည့်ကျင့်အပ်သော ပုဗ္ဗဘာဂပဋိပဒါ အမည်ရသည့် လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်သော ကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကို ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် ပွားများအားထုတ်လျက် နေထိုင် သည် ဖြစ်အံ့၊ လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်လျောက်ပတ်သောကြောင့် သာမီစိ အမည်ရသော လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်သော ကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကို အရိုအသေဖြည့်ကျင့်လျက် နေထိုင်သည် ဖြစ်အံ့၊ လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်သော ထိုကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကိုပင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်ကျင့်နေထိုင်သည် ဖြစ်အံ့၊ ထိုသူမျိုးသည်ကား တထာဂတ အမည်ရတော်မူသော သင်တို့ဆရာ ငါဘုရားကို ရိုသေသည် မည်၏ လေးစားသည် မည်၏ မြတ်နိုးသည် မည်၏ ပူဇော်သည် မည်၏ အမြတ်ဆုံးသော ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ပသနေသည် မည်၏။ အာနန္ဒာ ...ထိုကြောင့် ဤသာသနာတော်၌ ငါတို့သည် အရိယမဂ်၏ ရှေးအဖို့၌ ဖြည့်ကျင့်အပ်သော ပုဗ္ဗဘာဂပဋိပဒါ အမည်ရသည့် လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်သော ကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကို ကျင့်ကြံကြိုး ကုတ် ပွားများအားထုတ်လျက် နေထိုင်ကြပါကုန်အံ့၊ လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်လျောက်ပတ်သော ကြောင့် သာမီစိအမည်ရသော လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်သော ကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကို အရိုအသေ ဖြည့်ကျင့်လျက် နေထိုင်ကြပါကုန်အံ့၊ လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးအား လျော်သော ထိုကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကိုပင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်ကျင့်လျက် နေထိုင်ကြပါကုန်အံ့ဟု ဤသို့လျှင် အာနန္ဒာ ...သင်တို့သည် ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် ပွားများ အားထုတ်ကြရမည် - ဟု မိန့်ကြားတော်မူလေသည်။ (ဒီ၊၂၊၁၁၃-၁၁၄။ ဒီ၊ဋ္ဌ၊၂၊၁၆၅-၁၆၈။) လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါး ဆိုတာက မဂ်လေးပါး၊ ဖိုလ်လေးပါး နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ဆိုတာပါတဲ့။ မဂ်ဆိုတာက လမ်းပဲ။ ဖိုလ်ဆိုတာက မဂ်ရဲ့ ရလာဒ်လို့ သဘောပေါက်မိတယ်။ မဂ်စိတ်ပေါက်မှ ဖိုလ်ကို ရောက်တယ်။ ဒီ မဂ်လေးပါး ဖိုလ်လေးပါးကို သိဖို့ဆိုတာကလည်း မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့ (၁) မှန်ကန်သော ဥာဏ်အမြင်၊ (၂) မှန်ကန်သော အကြံအစည်၊ (၃) မှန်ကန်သော စကား၊ (၄) မှန်ကန်သော အလုပ်၊ (၅) မှန်ကန်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ (၆) မှန်ကန်သော လုံ့လဝီရိယ၊ (၇) မှန်ကန်သော နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှု၊ (၈) မှန်ကန်သော တည်ကြည်မှု တို့ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါသတဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချစ်ပါသည်ဆိုသော၊ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ကိုးကွယ်နေပါသည်ဆိုသော ကျွန်တော်တို့ အခြေခံတရား ၈ ပါးမှာ ဘယ်နှစ်ခုများ ပြည့်စုံနေကြပြီလဲဗျာ။
မြန်မာအင်ဖိုတက် နေရာကို အရင်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာ တချက်လွှတ် အမိန့်နဲ့ ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ အများပိုင်ကုမ္ပဏီလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အဓိက ရှယ်ယာတွေ အားလုံးကလည်း လူနည်းစုတစ်စုရဲ့ လက်ထဲမှာချည်းပဲ။ အိုင်တီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ရမှုမှာ ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းပေမယ့် အရှည်ကြည့်ရင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကောင်းစားဖို့ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အခုဆို အင်ဖိုတက်လို့ ပြောပြီး အထဲမှာ ဘာမှ မအိုင်တီတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ စာသင်ခန်းတွေနဲ့ ပြည့်လို့နေတယ်။ တကယ် အိုင်တီလုပ်ချင်တဲ့ Start up သမားတွေအတွက် နေရာတစ်ခု ရဖို့ဆိုတာ အခြေအနေကို မပေးဘူး။ တကယ်ဆို အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက မဟုတ်တဲ့ အိုင်တီ Campus တစ်ခုကို ထူထောင်ပေးသင့်တယ်။ အဲဒီ Campus ထဲမှာ R&D Centre တွေ၊ incubation centre အသေးစားလေးတွေ၊ ရုံးခန်းအသေးစားလေးတွေ လုပ်ပေးထားပြီး တကယ့်အိုင်တီသမားတွေအတွက် ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင် အိုင်တီကဏ္ဍ ဒီထက်ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှာ အမှန်ပဲ။ အခုတော့ လုပ်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ ရှိတာတောင် မြေနေရာတွေ အခန်းငှားခတွေ အင်တာနက်အင်ဖရာ တွေကြောင့် တစ်ခုခု စလုပ်ဖို့ဆိုတာ အတော်မလွယ်ဘူး။ မြန်မာအင်ဖိုတက် အနေနဲ့ကတော့ မြေနေရာ ပိုင်ဆိုင်မှု Asset ကတင် အခုကာလ ပေါက်ဈေးနဲ့ဆို ရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေမပါ မြတ်နေလောက်ပါပြီ။ မြန်မာအင်ဖိုတက်အနေနဲ့ ဒီလို အိုင်တီ Campus မှာ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အခန်းငှားစားတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း အလွန်ပဲ စိတ်ပျက်မိတယ်။
အကြောင်းပေါင်းစုံနဲ့ ပြန်လာကြတာပါ။ မြန်မာပြည် ရောက်တော့လည်း မြန်မာပြည်ကို အကျိုးပြုရအောင်လို့ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ အနစ်နာခံပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ် ဖြစ်သွားကြရော။ လှလိုက်တဲ့ နာမည်လေး။ တကယ်တော့ အကြောင်းပေါင်းစုံနဲ့ ပြန်လာကြတာပါ။
ကျုပ်ဟာတကယ်တော့ အရက်သမားကြီးပါဗျာလို့ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်တဲ့ အရက်သမားကြီးတစ်ယောက်ကို ချီးကျူးရမလိုလို အံ့သြရမလိုလို။
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေရဲ့ ချီးထုပ်ကြတာကို ဖုန်းဆက်ပြောလာပြန်တယ်။ အမျိုးတွေက ဟိုဘက်ကနေ ဒီဘက်ကို အိမ်ပြောင်းတယ်ဗျ။ ကလေးစီး စက်ဘီးလေး တစ်စီးရယ်၊ ပေါင်းအိုး နှစ်လုံးရယ်၊ ဟိုဟိုဒီဒီ ပစ္စည်းလေးတွေရယ်ကို ဟာရီရာကားနောက်ခန်းထဲ ထည့်သယ်လာသတဲ့။ အဲဒါ လှည်းတန်းနားက ယာဉ်ထိန်းရဲကြီးများက တားပါလေရောတဲ့။ တားတာက ကားမှန်က စတစ်ကာ ကပ်ထားလို့ဆိုပြီး ဖမ်းတာပါတဲ့။ ဒါနဲ့ စတစ်ကာမဟုတ် အော်ရဂျင်နယ်မှန်ကြီး ကညနက လက်ခံလို့ ဝှီးတက်တောင ထုတ်ထားပေးပြီးသား ခွာကြည့်ဆိုတော့ အတင်းခွာကြည့်ပြန်ပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ မရလေတော့ လိုင်စင်တောင်းကြည့်ပြီး ဒါက နယ်လိုင်စင်ကြီးလို့ ပြောပြန်သတဲ့။ နယ်လိုင်စင် ဘာဖြစ်လဲ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး မောင်းနှင်ခွင့် ရှိတာပဲ ဆိုတော့ ကားအထဲကို လှမ်းကြည့်ပြီး လူစီးယာဉ်ပေါ် ကုန်တွေ တင်လာလို့ အရေးယူရမယ်တဲ့ဗျား။ ဒါနဲ့ စကားတွေများကြပြီး လိုင်စင်ကို အရာရှိဆီ သွားပြပြီး ဘာတွေပြောမှန်း မသိပါဘူးတဲ့။ တော်တော်ကြာမှ ပြန်လာပြီး ခင်ဗျားကို ဒီတစ်ခါတော့ နားလည်မှုနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ ပြောသတဲ့ဗျာ။ ကျုပ်သာဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာ ဒီလိုလာပြော ဒီလိုလာရစ်လို့ကတော့ ဘာနားလည်မှုလဲဆိုပြီး သောက်ခွက်ကို ဘတ်ခနဲ ပစ်ထိုးပစ်မယ်။ ရဲတွေကို တစ်ခုခုလုပ်မှ ရတော့မယ်။
ဝန်ထမ်းတွေကောင်းကြောင်း စိတ်ချမ်းသာရကြောင်းတွေပဲ ရေးရင်း ပြောရင်း စိတ်ချမ်းသာချင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့သူကို ကောင်းတယ်လို့ ရေးဖို့လည်း လက်မတွန့်ပါဘူး။ စကားမစပ် လင့်လမ်းနားက ယာဉ်ထိန်းရဲ ကောင်းတဲ့အကြောင်း အင်တာနက် ဘလော့ပေါ်မှာ စရေးခဲ့တာ ကျွန်တော်ပါ။ နောက်မှ 7Day က အကျယ်တဝံ့ရေးပြီး ဆုတွေဘာတွေ ရသွားသွားတာ။ ထားတော့။ ဒါပေမယ့် တနေ့တနေ့ တွေ့နေရတာတွေက သောက်ချိုးမပြေတဲ့ အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းတွေပဲမို့ ဘယ်လိုမှ အကောင်းမြင်ဝါဒ ကျင့်သုံးလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
တခါတလေ လူတွေရဲ့ သဘာဝကို အတော်ရယ်ချင်နေမိတယ်။ အခု ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောကြားဆောင်ရွက်တယ်ဆိုပြီး ချီးကျူးကြ ထောက်ခံ နေလိုက်ကြတာ။ ဟိုးတချိန် သိပ်မကြာခင်က သူ့သမီးလေး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်တာကို စစ်အစိုးရ အရာရှိကြီးသမီး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်တယ်ဆိုပြီး ဝိုင်းအော်ကြ ကန့်ကွက်ကြလို့ သူတို့မိသားစုခမျာ ပြဿနာတွေ တက်ကြရတာလည်း သတိရနေမိသေးတယ်။ ဟက်ဟက်
သူ၏ယခင် မိန်းမပင် ဖြစ်လေကြောင်း
မည်ပုံမည်နည်း ဘုရင်ခံကြီး ဖြတ်ခုတ်သွားသနည်းကို
မျက်ရည်လည်ရွဲ ငိုပွဲဆင်ကာ ပြောသတဲ့လေ
ထိုလိုလူညစ် ဘယ်သို့ဘယ်နည်း ဘုရင်ခံဖြစ်။
ရပေ မယားတစ် ကလေးနှစ်။
စစ်သက် လေးဆယ် နီးပါးလောက် တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့်နဲ့ နေလာခဲ့တဲ့သူတွေ အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေး ပြောင်းလာတဲ့အခါ အရင် အမူအကျင့်တွေ ပျောက်ဖို့ ဘယ်လောက် ကြာနိုင်မလဲဟင်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ စစ်တပ်က လူဝတ်ပြောင်းပြောင်းပြီး အုပ်ချုပ်မှုရာထူး ခပ်ကြီးကြီး နေရာတွေ ယူကြတာကို မဖြစ်မနေ ပြောင်းပစ်ရမယ်။
ဦးဝင်းမြင့်ဟာ သိပ်တော်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် စီးပွားရေးပညာရှင်လို့ ဘယ်သူမှ အသိအမှတ် မပြုဘူး။ ဦးကျော်ဆန်းဟာ ပြန်ကြားရေး၊ ဖျော်ဖြေရေးတွေ တာဝန်ယူထားရပေမယ့် သူဘယ်လောက် ဗဟုသုတကြီးမားတယ်၊ ဖျော်ဖြေရေးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာ ဘာအထောက်အထားမှ မရှိဘူး။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘဝ ကျောင်းကပွဲတောင် ဝင်ကဖူးခဲ့ရဲ့လား မသိပါ။ သိပ္ပံနည်းပညာ ဝန်ကြီးကရော ဘဝမှာ ဘာတွေများ တီထွင်ပြခဲ့တာ ရှိလဲ။ ရထားဝန်ကြီးရဲ့ မိသားစုတွေ ရထားရောစီးဖူးရဲ့လား အများကြီးပါပဲ။ စစ်သားတွေဟာ သိက္ခာရှိရှိ စစ်တပ်ထဲမှာနေပြီး နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ Civil Administration လောကထဲ မဝင်သင့်ဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ့်အထုပ်ကို ကိုယ်ပြန်ဖြေတာနဲ့ သိပ်တော့ မထူးဘူး။ သူတို့တွေလည်း အရှက်ကွဲ၊ ကိုယ်တွေလည်း ခံစားရတာပေါ့လေ။
ဦးခင်ရီက ပြောခဲ့တယ် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူးတဲ့။ အခု ဦးသိန်းစိန်ကပြောတယ် ဘင်္ဂလီတွေ ဆိုကြပါစို့တဲ့။ နှစ်ယောက်စလုံး မှန်သလိုလိုပဲ။ ဟဲဟဲ ပြောပါတယ် စကားလုံး နှစ်လုံးကြား ကစားသွားလိမ့်မယ်လို့။ တကယ်တော့လည်း အဲ့ဒီ့မှာ နေနေကြတဲ့ သူတွေက နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ သိပ်ပြီးတော့ မတွေ့ရဘူး ပါဘူးတဲ့ ဒါကတော့ ရခိုင်သားတွေနဲ့ ရှင်းပေတော့ ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သူ့လူမျိုး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ ခွဲခြားလို့မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်က လူသားဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ မြင်ရမယ်တဲ့။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကျူးကျော်သူတွေကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းပစ်ရမယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ သမ္မတရုံးက ဦးမှူးဇော်ကြီးတောင် သတိရသွားတယ်။ ဟင်းဟင်း။
၃၄၈။ နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့် နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ခွဲခြားမှုမရှိစေရ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်းတော့ ဗိုလ်ချုပ်အေဘယ်တစ်ယောက်ပဲ စစ်တပ်ထဲမှာ ရာထူးအကြီးဆုံးရသူ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကိုယ့်မိန်းမ ခရစ်ယာန် ဆိုရင်တောင် ရာထူးကြီး မပေးတော့ပါဘူး။ အခုရောဟင် ?
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ကားတွေကြပ်နေတယ်။ လှည်းတန်းမှ မဟုတ်ဘူး၊ ရွှေဂုံတိုင်မှ မဟုတ်ဘူး။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင် အစိုးရလက်ထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ တံတားကြီးများ လမ်းမကြီးများ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ဖော်ပြလေ့ ရှိကြတယ်။ လုပ်တော့ လုပ်ရှာပါတယ်။ ပိုက်ဆံတွေလည်း သောက်သောက်လဲ ကုန်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခြစားမှုနဲ့ အမြော်အမြင် မရှိမှုက ပိုများနေလေတော့ နောင်ဆယ်နှစ် ဘယ်နေရာမှာ လူတွေ များလာနိုင်တယ်၊ လူနေမှု ဘယ်လောက် ဖြစ်လာမယ် စတာတွေကို စနစ်တကျ မတွက်ချက်တတ်တော့ အခုဆို ဒုက္ခရောက်ကြပြီ။ ဘုရင့်နောင်တံတားကိုကြည့် စဆောက်ကတည်းက အနည်းဆုံး လေးလမ်းသွားလောက် မဆောက်ခဲ့သင့်ဘူးလား။ အခုဆို အဲဒီကိုဖြတ်ရင် ၁ နာရီလောက် လမ်းပိတ်တာ ခံနေရတယ်။ အခု အဲဒီတံတားကို တိုးချဲ့ဖို့ လုပ်နေရပြီ။ အလုပ်အပိုတွေ ထပ်လုပ်ရပြီး ပြည်သူ့ပိုက်ဆံတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ကုန်ရတယ်။ မိုးခပ်သည်းသည်း ရွာတာနဲ့ လမ်းတွေက ပြန်ပြန်ဖာနေရတယ်။ တခါထဲ အကောင်းစား လုပ်လိုက်ရင် ပြန်မပြင်ရတော့ ဝင်ငွေဘယ်ရှိတော့မလဲ ဆိုတဲ့ စကားတောင် ပေါ်လာတယ်။ လမ်းတွေမကောင်းတော့ ကားတွေက ရှောင်ကွင်းမောင်းရ လမ်းပေါ်ရေကျော်တော့ ဆလစ်တွေဖြစ်ပြီး ယာဉ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်ကြရ အများကြီးပါပဲ။ လမ်းပေါ်မှာ ဈေးမရောင်းရဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်တယ် ပြီးရင် ဈေးသည်တွေဆီကနေ စည်ပင်က အကောက်ပြန်ကောက်ပြီး ဈေးရောင်းတာကို လက်ခံတယ်။ လိုင်းကားသမားတွေက ယာဉ်ထိန်းရဲကို အပြတ်ပေါင်းထားတယ်။ ပြီးရင် မောင်းချင်သလိုမောင်းတယ်။ အိမ်တွေဆောက်တဲ့အခါ ကားရပ်နားဖို့နေရာကို ထည့်မတွက်မိဘဲ ဆောက်လုပ်ခွင့်တွေပေးတယ်။ ကားတွေက လမ်းပေါ် တက်ရပ်တယ်။ ကားလမ်းတွေ ပိတ်ကုန်တယ်။ အများကြီးပါပဲဗျာ တကယ်တော့ အားလုံးက ဆက်စပ်နေတာပါ။ လုပ်ခဲ့တာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ဒါပေမယ့် စောက်သုံးမကျခဲ့လို့ ငွေတွေကုန် ရလာဒ်မကောင်းတာတွေကိုလည်း အစိုးရအနေနဲ့ သတိပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ :(
ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ တွေ့လာရပေမယ့် ထိုင်ကျေးဇူးတင်နေရလောက်တဲ့ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲမှုတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ တကယ်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် တရုတ်ပြည်က ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးတုန်းကလို ဖြုတ်ထုတ်သတ် လမ်းစဉ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကျင့်သုံးသင့်တယ်။ အခုတော့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုက အမြစ်တွယ်ရုံမက အသီးပါ သီးနေတဲ့အပြင် ရာထူးယူထားတာနဲ့ ကျေးဇူးရှင်လိုလို ဖြစ်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက သူဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ပြည်သူတွေ သိပ်မခံစားရဘဲ လမ်းတဝက်မှာ ဇာတ်ကြောင်းက ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ ဗျူရိုကရေစီစနစ်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ပြောင်းလဲယူမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဒီတစ်သက်တော့ မီတော့မယ် မထင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းက ဒါတွေအားလုံးဟာ နိုင်ငံသားတိုင်း အရင်ကတည်းက မူလဘူတ ရသင့်တဲ့ အရာတွေချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးပြူး လျှာထွက်အောင် ညှစ်ထားတဲ့လက်လေး နဲနဲလောက် ဖြေပေးလိုက် ကျေးဇူးတင်လိုက်ရ ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒါတောင် လည်မျိုညှစ်ထားတဲ့လက်က လျှော့တော့လျှော့ပါရဲ့ နှာခေါင်းပေါက်ထဲ လက်နှစ်ချောင်း ပြန်သွင်းလိုက်တာမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးရှင် အပေါက်ချိုးနေတဲ့ စရိုက်တွေ တွေ့မိတော့လည်း လေပါတယ်။ ဥပမာ- ကားတင်သွင်းခွင့်တွေ
ရခိုင်အရေးကိစ္စအတွင်း ဒုက္ခရောက်ကြရသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအတွက် ကမ္ဘာတဝှန်းရှိ အလှူရှင်များမှ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ခုနစ်ဆယ်ခန့်ကို Handy Myanmar Youths မှ ကိုသက်ထူးက မိသားစုတစ်စုလျှင် သုံးသောင်းနှုန်းဖြင့် မောင်တောမြို့နယ်အထိ သွားရောက် လှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း သွားရောက်ပေးခဲ့တဲ့ ကို Thet Htoo၊ အကူအညီတွေ အများကြီးပေးခဲ့တဲ့ ၀ံလက်အဖွဲ့က ကိုခိုင်ကောင်းဇံနဲ့ ခရီးသွားလာရေးမှာ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ရတနာနဲ့ Unique Asia Travels တို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်။
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ကားလုံးဝမရပ်ရ။ (ရဲကား စစ်ကား မပါ)
ဖားများ။ ဖားများ လွန်စွာအော်သည်။ ဖားအော်လို့ မိုးမရွာပါ။ မိုးရွာခါနီးတွင်သာ ဖားများအော်ကြသည်။ ဆောင်းတွင်းတွင် ဖားမအော်ခြင်းက သက်သေဖြစ်သည်။ ဖားအမျိုးအစား များစွာရှိသည်။ စားဖားကြီးများမှာ လွန်စွာ ဆူဖြိုး၏။ ချက်တတ်လျှင် အလွန် စားကောင်းသည်။ ဖားပျံခေါ်သော ဖားများကတော့ ဟိုကပ်ဒီကပ် ဟိုကူးဒီကူး အလွန်တော်သည်။ တခါတရံ သေးဖြင့် ပန်းသွားတတ်သေးသည်။ မထုံတတ်တေးနှင့် ပုန်းအောင်းကွယ်လျှိုးကာ အဖြိုးကြီး ဖြိုးနေကြသော ဖားပြုပ်ကြီးများလည်း ရှိသေး၏။ ရုပ်ဆိုးသောကြောင့် အပြင်သိပ်မထွက်တတ်ပါ။ လယ်ရိုးတလျောက် တစာစာအော်တတ်သော ဖားပေါင်စင်း လေးများလည်း ရှိသေးသည်။ ဖားခုံညင်းကြီးများ အကြောင်းတော့ သိပ်မသိပါချေ။
Difficulties are hard to pass, but have to conquer. If not you are fail.
ဂျင်မီခရမ်တန်တို့ ဂျနီဖာတင်လေးတို့ကို မမီလိုက်ပေမယ့် မာမာမင်း၊ ခင်ခင်ထွေး၊ မကျင်လွမ်၊ ဂိုပါလ်၊ ပပ၊ ဖီးလစ် စတဲ့ နာမည်တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေတယ်။ မှတ်မိဆို သူတို့ကလည်း နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတံဆိပ်တွေ လွဲခဲတာကိုး။ သူတို့တွေ ပြိုင်ပွဲများ ပြနေရင် ကိုယ်တိုင် သွားမကြည့်ရပေမယ့် တီဗွီကနေတောင် အားပေးဝမ်းသာ နေခဲ့ရတာ။ အခုများတော့ ထွေးညိုလေးရယ် ~~ အူစိန်ဘော့ကို အားပေးနေရတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲက မြေပုံတွေ GIS တွေလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကနေ မြန်မာပြည် မြေပုံဝယ်ထည့်တယ်။ သူတို့က Mapsource ကို Crack လုပ်ပြီး အပေါ်ကနေ မြို့ရွာတွေ လိုက်ထည့်လို့ ဝယ်တဲ့သူကို ခြောက်သောင်းနီးပါးနဲ့ ရောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က တကယ့် Lincense Software လိုချင်တာဆိုတော့ ဒီလိုဆိုရတယ်ဆိုပြီး ကိုးသောင်းလား တစ်သိန်းလားမသိဘူး ပေးလိုက်ရတယ်။ ညနေ Update လုပ်တော့ စက်ထဲ ထည့်ထားသမျှ အားလုံး လစ်သွားတယ်။ Crack Version ကြီး ဖြစ်နေတာကိုး။ သူတို့ ထည့်ပေးထားတာက Version 3.0 လားမသိဘူး။ ဒါနဲ့ စိတ်နာနာနဲ့ အဲဒါတွေ ဘယ်လို Crack လုပ်တဲ့အကြောင်း ညလုံးပေါက် အင်တာနက်မှာ ထိုင်မွှေလိုက်တော့ အကုန်ထွက်လာတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ဖုန်းနဲ့ ပြန်ခေါ်ပြီး ကောင်းကောင်းသမလွှတ်လိုက်တယ်။ သုံးသောင်းလား မသိဘူး ပြန်တောင်းပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့သုံးနေတဲ့ဟာထက် မြင့်တဲ့ဟာတောင် ပြန်ပြီး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ် ကိုယ်က လိုချင်တာဖြစ်လို့ တောင်းသလောက် ပေးဖို့လည်း ဝန်မလေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲလိုဂျင်းထည့်တာတောင် မပြောနဲ့ မြေပုံမှာတောင် ဧရာဝတီမြစ်က မြစ်ကြီးနားလေးတဝိုက်မှာပဲ ရှိနေတာတော့ လွန်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Mapsource V.5.0 ကို နိုင်ငံခြားမှာ လှမ်းဝယ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာတောင် မရဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အကူအညီပေးလို့ အမေရိကားကနေ အဆင့်ဆင့် လှမ်းဝယ်ယူရတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၅၀ လောက် ပေးရတယ်။ အဲဒါလေး ထည့်လိုက်တော့မှ ဧရာဝတီဟာ မြန်မာပြည် မြောက်ဖျားကနေ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲ စီးဝင်နိုင်တော့တယ်။ သူများစီးပွားရေးကို အပြစ်မပြောချင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ တန်တဲ့ Service ကို ပြန်လိုချင်တာပါပဲ။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က အဲလိုလား ဝန်ထမ်းတွေက လုပ်နေတာလားလည်း မဝေခွဲတတ်တော့ဘူး။
သင်တန်းတွေ အတော်များများမှာ ကျွန်တော် စာသင်ရင် ကျောင်းသားတွေကို ကျွန်တော် မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက တာရာမင်းဝေနဲ့ ဂျူး ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ ဘယ်လိုပိုကောင်းတာလဲလို့။ အဲလိုမေးရင် တာရာမင်းဝေ ကြိုက်တဲ့သူက တာရာမင်းဝေ ပိုကောင်းတယ်၊ ဂျူးကြိုက်တဲ့သူက ဂျူးပိုကောင်းတယ် ဖြေကြတယ်။ ဘယ်လိုကောင်းတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ မဖြေတတ်ကြဘူး။ အများအားဖြင့် Emotionally Response တွေပဲ ရတယ်။ Statistically လေ့လာသူလည်း အပြင်ပညာရှင် နယ်ပယ်မှာတောင် မတွေ့ဖူးဘူး။ Academic Answer ဟာ Emotion ကို အားပြုလို့ မရဘူး။ အထောက်အထား ရှိရမယ်။ ပြရမယ်။ အဲဒီလို ပြောပြီးမှ သူတို့ကို Research လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပြောပြပါတယ်။ တာရာမင်းဝေစာအုပ် ၁၀အုပ်၊ ဂျူးစာအုပ် ၁၀အုပ် ထဲက စာသားအားလုံးကို ကွန်ပျူတာထဲထည့်။ စာလုံး တစ်လုံးချင်းဖြတ်၊ စာလုံး အတွဲတွေဖြတ်၊ ဘယ်လို စာလုံးတွေကို ဂျူးကတော့ Frequency ဘယ်လောက်တောင် သုံးတယ်။ ကိုတာရာကတော့ ဘယ်လောက်သုံးတယ်။ ဘယ်စာလုံးတွေက အားကောင်းတယ်၊ ဘယ်စာလုံးတွေက အားပျော့တယ် စသည်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့။
စဉ်းစားနေတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်က အရမ်းကို ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက် ဆိုပါတော့။ ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာမှာနေခဲ့ရတယ်။ ရွာက အိမ်ခြေ ၁၀၀ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီအိမ်ခြေ တစ်ရာလုံးကို တစ်အိမ် ၁၀ သိန်းလောက် တန်တာကို သိန်းတစ်ရာပေးပြီး ဝယ်မယ်ဗျာ။ အိမ်တစ်ရာဆိုတော့ သိန်းတစ်သောင်း။ ဒါဆို တစ်ရွာလုံးက ကျွန်တော့်မြေ ဖြစ်သွားပြီ။ ရွာလို့ ဆက်သတ်မှတ်လို့ ရလား။ ဆယ်အိမ်မှူးတွေ ရာအိမ်မှူးတွေ ဘာဖြစ်သွားမလဲဟင်။
ရှမ်းပြည်ဘက် တရုတ်ဖြူတွေ ကျူးကျော်တုန်းကလည်း ဗမာတွေဟာ ရှမ်းတွေဖြစ်တာ တို့နဲ့ ဘာဆိုင်လည်းဆိုပြီး မနေခဲ့ဘူး။ ကချင်မှာ တရုတ်က လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ဗမာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ပေါင်းလုပ်ခဲ့တော့ရော ကချင်တွေဖြစ်တာ ငါတို့နဲ့ဆိုင်လားဆိုပြီး ဗမာတွေ ငြိမ် နေခဲ့ပါသလား။ ရခိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးဖြစ်တော့ရော တနိုင်ငံလုံး ဝိုင်းကန့်ကွက် ကူညီပေးခဲ့တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘုရင်တွေလက်ထက်နဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ဗမာတွေ အများစုဖြစ်ခဲ့တာ ဗမာလူမျိုးအားလုံးနဲ့ မဆိုင်ပါ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ဗမာလူမျိုး ကျွန်တော်ဟာ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲတမ်း အဲဒီဒေသက ဂုဏ်ယူနိုင်သူဖြစ်အောင် စဉ်းစား ကြိုးစားပါတယ်။ ပဒေသရာဇ် အမွေဆိုး၊ အချောင်သမားတွေနဲ့ အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်စနစ်တွေကြောင့် ဒီလူတွေအားလုံး မွဲပြာပုဆိုး ဖြစ်နေတာကို ဗမာတွေ ဗမာတွေလို့ နာမည်မတပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံထဲနေတဲ့ ဘယ်သူမဆို ဘယ်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖြစ် ကုလားဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကရော အခြားလူမျိုးစုတွေ အပေါ်မှာ ဘာများ ကောင်းကျိုးပြုဖူးသလဲ ဆိုတာကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားဖို့ မမေ့သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လူမျိုးရေး အစွဲကြီးမှုနဲ့ ကိုယ်လိုတာတစ်ခုပဲ သိတတ်မှုဟာ အလွန်ပဲ ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဆင်းရဲ မွဲတေ စုတ်ပြတ် ဘဝနိမ့်ပါးနေတဲ့ ဗမာတွေ အများကြီး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာ ရှိနေပါတယ်။
ကိုယ်က Technology ဘက်ကမို့ ဒီလို စဉ်းစားကြည့်တယ်။ E-Gov စနစ်နဲ့ E-Banking စနစ်ကို ပထမဆုံး စနစ်တကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်သင့်တယ်။ ပြီးရင် ပမာဏ ဘယ်လောက်ထက်ပိုသော မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမျိုးမဆို Bank Transaction သာ အသုံးပြုရမည်။ အသုံးမပြုဘဲ Offline ပေးချေကြောင်း တွေ့ရှိရင် ကြီးလေးစွာ အပြစ်ပေးနိုင်သည်၊ ဘဏ်တွေဟာ အစိုးရက ဥပဒေကြောင်းအရ အလိုရှိတိုင်းမှာ ဒီ Transaction အားလုံးကို ပြနိုင်ရမည် ဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုး ထုတ်ပြန်သင့်တယ်။ အခုဟာက ၁၀၀၀၀ နဲ့ ၀ယ်ရင် ၁၀၀၀ ပြတယ်။ အဲဒီ ၁၀၀၀ အပေါ်မှာလည်း အခွန် မဆောင်ကြဘူး။ ဒီတော့ အတင်း အခွန်ဆောင်ခိုင်းလည်း တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ၁၀၀၀ ပေါ်မှာပဲ ဆောင်ရမှာမို့ အေးဆေးကလေးမွေး သနားသေးတယ်။ အထက်ကလိုသာ ဥပဒေရော စနစ်ပါ ရှိမယ်ဆို ဘယ်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မှု လိမ်လို့ မရသလို၊ အခွန်ဆောင်သလား အခွန်ရှောင်သလား၊ ငွေဖြူလား ငွေမည်းလား ဒီငွေ ဘယ်ကရသလဲ ဆိုတဲ့ဟာတွေပါ အားလုံး ထိုင်ကြည့်နေရုံပဲ။ ပြတ်ပြတ်သားသား အပြစ်ပေးဖို့ပဲ လိုတာ။ အားလုံးလိုလိုက Corruption ဖြစ်နေတာမို့ ဒီစနစ်တွေ မအောင်မြင်တာ သိပ်တော့ မထူးဆန်းဘူး။
ပြဿနာကတော့ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က ရခိုင်ရော ဗမာတွေမှာပါ မဟာမုနိဘုရားကြီးလို Smooth ဖြစ်ပြီး Structure ကျလွန်းတဲ့ လက်ရာမျိုး ကြေးသွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားနဲ့ လက်ရာတူတွေ မတွေ့ရတာပါပဲ။ တွေ့တဲ့ဘုရားတိုင်း သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီး တည်တဲ့ ဘုရားတွေလို့ ယုံကြည်ပြန်ရင်လည်း အိန္ဒိယက မြန်မာပြည်ကို သြဇာလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကို လက်ခံရမယ်နဲ့ တူပါရဲ့။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကကြီး ခင်ဗျား။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄) ရွေးချယ်ခံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမောင်ဟာ ၂၀၁၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့ည ၈ နာရီခန့်မှာ ရေမြောင်းကို တိုင်ရိပ်ထင်ပြီး နင်းရာ နှစ်ပေအနက်ရှိ ရေမြောင်းအတွင်း ခြေချော်ကျပြီး မြောင်းပေါင်နှင့် ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်၊ ဝမ်းဗိုက်တွင် ဆောင့်မိ၍ နေပြည်တော် ခုတင်၁၀၀ ဆေးရုံကြီးသို့ တက်ရောက်ကုသရာ ဘယ်ဘက်နံရိုး သုံးချောင်း ကျိုးသွားပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကျောက်ကပ် အပေါ်ပိုင်းတွင်လည်း သွေးခြည် အနည်းငယ် ဥသွားပါတယ်။ ထိုရောဂါကို ကုသရန် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ခန့် အနားယူရမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ခွင့်ပြုပါရန်....။ နာယကကြီးခင်ဗျား မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်သိန်းသည် ပင်ကိုက အားနည်းနေသူဖြစ်ပြီး ယခု အအေးမိ နေမကောင်းဖြစ်၍.......။ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းက ခွင့်တိုင်တာလေးတွေ ဖတ်မိပြီး သဘောကျနေမိတာ။ ဟိ။
ဓမ္မစေတီမင်း အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ဒီလောက် ဘုန်းတန်ခိုးအာဏာ ထက်မြက်နေချိန်မှာ သွန်းလိုက်တဲ့ ခေါင်းလောင်းက အသံမထွက်ရင် ဒီအတိုင်းထားမလား ပြန်အရေကျိုပြီး ဘာလို့ ပြန်မသွန်းခဲ့လဲ။ အသံမထွက်တဲ့ ခေါင်းလောင်းကို ဘုရားပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းကြီးပဲ ဆက်ထားမလား။ ဒီလောက် ခေါင်းလောင်းကြီးကို ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ကနေ ငဇင်ကာ ဘယ်လို သယ်ချသွားသလဲ။ အရှေ့ဘက်မုခ်က သယ်ပြီး ပုဇွန်တောင်ချောင်းအတိုင်း ဘာလို့ ခက်ခက်ခဲခဲ သယ်မလဲ၊ ကမ်းတလျှောက်မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာရွာတွေချည်းပဲ လုံခြုံရေးအရလည်း ခက်ခဲတယ်။ သယ်ခဲ့ရင်လည်း ကန်တော်ကြီးကို ဖြတ်သယ်ရမှာပဲ။ တကယ်လို့ တောင်ဘက်မုခ်က ချပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းတလျှောက် ဒလိမ့်တုံးတွေနဲ့ လှိုင်မြစ်အထိ သယ်မယ်ဆို တဖြောင့်ကြီး ပိုမလွယ်ဘူးလား။
လပ်ဇက်ကားနဲ့ သံလွင်ပင်စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်တုန်းက ဒီအပိုဒ်လေးကို ဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဖရိုင်းမန်းကို အင်မတန်မှ အလေးပြုချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်။ Globalution: ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အုတ်မြစ်တို့ကို ချပေးရာ၌ အီလက်ထရွန်းနစ်အုပ်က အကူအညီ ပေးခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ကို အဝေးအလွန်မှ တော်လှန်ရေး (သို့) ဂလိုဘာလူးရှင်းဟု ကျွန်တော်က ခေါ်ပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အလည်အပတ် ခရီးတွင် ဂလိုဘာလူးရှင်းကို ဆူဟာတို နေဝင်ချိန် အင်ဒိုနီးရှား၌ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရှာဖွေ တွေ့ရှိလိုက်သည်။ ကျွန်တော်က ဂျာကာတာ ရုပ်မြင်သံကြား ပေါ်ပြူလာ စကားပြောခန်း ပြောသူ ဝီမာဝီတိုလာနှင့် ညစာ စားနေစဉ် သူက အင်ဒိုနီးရှား လူလတ်တန်းစား၏ လူငယ် မျိုးဆက်သစ်တို့ အကြောင်းကို သရုပ်ဖော် ပြောသည်။ အသက် ၂၀ နှင့် အသက် ၃၀ ကြား အင်ဒိုနီးရှား ပညာတတ် လူငယ်တို့၌ တူညီသော အချက်တစ်ချက် ရှိကြောင်း၊ ၎င်းမှာ သူတို့သည် စာရိတဿ္တ မပျက်ပြားဘဲ သူဌေး ဖြစ်ချင်ကြကြောင်း၊ သူတို့ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ကြောင်း၊ သို့သော် သူတို့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဤအတွက် မတိုက်ခိုက်လိုကြောင်း ပြောသည်။ သူက ဆက်လက်ပြီး ဤအင်ဒိုနီးရှား မျိုးဆက်သစ်က ဆူဟာတိုလက်ထက်၌ ထိပ်ပိုင်းမှစသော ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဘယ်သောအခါမှ ဖြစ်ပေါ်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော် မျိုးဆက်သစ်တို့က အောက်ခြေစ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး ကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ကြောင်း၊ ဘာ့ကြောင့်လည်း ဆိုတော့ မြို့နေ ဆင်းရဲသားလူထု ပုန်ကန် ထကြွလျှင် အလွန် အန္တရာယ်ကြီးစွာ နေရသည့် ဘဝကို ပြန်လည် ရောက်သွားသည့်နှစ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့် သူတို့၏ မဟာဗျူဟာသည် အဝေးအလွန်မှ တော်လှန်ရေး ဂလိုဘာလူးရှင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့၏ မဟာဗျူဟာ တစ်ခုလုံးက အင်ဒိုနီးရှားကို ဂလိုဘယ်စနစ်ထဲ စုစည်း ရောက်ရှိသွားရေးကို သူတို့တတ်နိုင်သမျှ တစ်ခါတစ်ရံ အသိရှိရှိနှင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံလည်း မသိလိုက်ဘဲနှင့် အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားကို ဂလိုဘယ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဈေးကွက်တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ချည်နှောင် ပေးခြင်းအားဖြင့် ကမဿ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ဖြစ်စေ၊ ပီဇာဟတ်၊ အေပက်၊ အာဆီယံ၊ မာရီလင့်ခ်ျနှင့် ဖြစ်စေ၊ ပရိုက်စ်ဝါးတား ဟောက်စ်ကူးပါး နှင့်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အခွင့်အရေး အစုအဖွဲ့ NGO တို့နှင့်ဖြစ်စေ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မိခြင်း အားဖြင့် ထိပ်ပိုင်းမှ စတင် ကြိုးပမ်းလိမ့်မည် မဟုတ်သော၊ အောက်ခြေက ဘယ်လိုမှ မမွေးထုတ်နိုင်သော စည်းမျဉ်းအခြေခံ စနစ်တို့ကို အဝေးအလွန်မှသာ တင်သွင်းနိုင်ဖွယ် ရှိမည်ဟု သူတို့က မျှော်လင့်ကြသည်။
လက်ဇပ်ကားနှင့် သံလွင်ပင်၊ မောင်စူးစမ်း၊ စာ၂၂၃
ဆရာကျော်ဝင်းနဲ့ လှည်းတန်းမှာ တစ်ခါ အရက်သောက်ဖူးတယ်။ ဆရာဦးကိုလွင် ဒါနပြုတယ် ထင်ပါတယ်။ သူ့အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်း အငြင်းအခုံ သန်သူများနဲ့။ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ သူ့ကို ဘယ်လိုဝေဖန်ဝေဖန် အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဒေါသလည်း မထွက်ဘူး ပြိုင်လည်း မငြင်းဘူး။ သူ့သဘောထားလေးတွေတော့ ခပ်ဖြေးဖြေး ပြောပြတတ်တယ်။ အဲဒီအထဲက ကျွန်တော့်ခံယူချက်နဲ့ တထပ်တည်းကျတဲ့ သဘောထားတစ်ခု Reactive or Proactive: ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ပြက်လုံးတစ်လုံး ကြားဖူးတယ်။ လက်ဝဲသမားတွေကို ခတ်တဲ့ ပြက်လုံးပေါ့။ အရင်ကတော့ မကြိုက်ဘူး။ အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ သိပ်မဆိုးဘူးပေါ့။ လူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်သွားတာ ကျောက်တုံးတစ်တုံး ဝင်တိုက်မိတယ်။ ဒီလိုတိုက်မိရတာ နယ်ချဲ့စနစ်ကြောင့်ဆိုပြီး ကျောက်တုံးကို ပိတ်ကန်လိုက်တယ် ဆိုတာပေါ့။ အမှန်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် နမော်နမဲ့သွားလို့ တိုက်မိတာ။ အဲဒီလိုပဲ။ ဒီမှာလည်း ပြဿနာက လူငယ်တွေ အများစုက ခေတ်ကိုကြောင့်၊ စနစ်ကြောင့်ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုးကြတယ်။ ဒါမမှန်ဘူးလား ဆိုတော့ မှန်သင့်သလောက် မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တိုးတက်မှုကို စေ့ဆော်တဲ့ စဉ်းစားပုံတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ Reactive ပဲ။ တရားခံရှာတာ။ အမှန် ဖြစ်သင့်တာက တာဝန်ယူစိတ်နဲ့ ချဉ်းကပ်သင့်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ Proactive စိတ်နဲ့ ချဉ်းကပ်သင့်တာ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Reactive ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သားကောင်လို့ သတ်မှတ်တာ။ Victim ပေါ့။ ခေတ်ရဲ့ သားကောင်လို့ သတ်မှတ်တာ။ ဒါ ညံ့ရာကျတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ သမိုင်းကို ဖန်တီးမယ့်သူတွေက သမိုင်းရဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ သမိုင်းရဲ့သားကောင် မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒီတော့ တစ်ဦးချင်း အနေနဲ့လည်း ခေတ်ကို အပြစ်တင်နေရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ပိုပြီး တာဝန်ရှိတာတော့ အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့။ Source: ကျော်ဆန်းမင်း၊ ဆရာကျော်ဝင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဆောင်းပါး၊ The Voice Journal's Vol.5/ No.29
Posted by NLS at 1/13/2013 04:07:00 PM 1 comment Links to this post
Posted by NLS at 1/13/2013 04:06:00 PM 1 comment Links to this post